Myagdi News - कृषि Archives - Myagdi News
सरकारले ल्यायो किसान पेन्सन योजना, १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने
काठमाडौं । सरकारले किसान पेन्सन योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । उनले भनेका छन्,…
म्याग्दी । म्याग्दीको ग्रामीण भेगका नमुना कृषकहरुलाई लक्षित गरी बेनीमा सञ्चालित पुनर्ताजगी तालिम तथा स्थलगत अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । युएसआईडीको सहयोगमा मिलन म्याग्दीद्वारा सञ्चालित सुआहारा कार्यक्रमद्वारा पुनर्ताजगी तालिम तथा…
कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि हरियाली मोडेल–योजना आयोगका पुर्ब उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ
सिंगा । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्ब उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा हरियाली मोडेलको कृषि फार्म प्रभावकारी हुने बताउनुभएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ सिंगामा शनिबार हरियाली ग्रुप प्रा.ली.को तेस्रो र हरियाली कृषि…
पुलाचौरका कृषकलाई यान्त्रिक हलो बितरण
बेनी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५ पुलाचौरका कृषकहरुलाई यान्त्रिक हलो बितरण गर्न सुरु भएको छ । खेती कार्यमा यान्त्रिकरण गरेर लागत घटाउने उद्देश्यले वडा कार्यालयको प्रस्ताबमा बेनी नगरपालिकाले बिनियोजन गरेको बजेटबाट यान्त्रिक हलो…
खोटाङ । खोटाङमा सञ्चालित सशक्तिकरणका लागि महिला संलग्नता र जीविकोपार्जनका लागि उद्यमशिलता (विफिल) परियोजनाले किसानलाई ह्याचरी प्रदान गरेको छ। क्रिष्टिएन एड नेपालको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको परियोजनाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मामा गठित…